March 2020 – Media Sharing
ဘဝ နေ နည်း (၁၅) ချက် ( သင့် အတွက် အကျိုးရှိစေမယ့် စာ )
၁ ။ မလိမ်ပါနဲ့ ။ လူနှစ်ဦးရဲ့ ဆက်ဆံရေးဟာ ယုံကြည်မှု အ ပေါ်မှာ အ ခြေခံ တယ် ။ ဒါကြောင့် တဖက်သားကို လေးစားမှု ပြ သော အား ဖြင့် လူ ပီသ စွာ မလိမ်ညာ ပါ နဲ့ ။ ယုံကြည်မှု
ဆီးချိုရောဂါသည်တွေအတွက် ဘုရားပေးတဲ့ နတ်ဆေးတစ်ခွက်…
တန်ဖိုးကြီး အင်္ဂလိပ်ဆေးတွေ ဝယ်ပြီး အမြဲမမှီဝဲနိုင်သူတွေ အတွက်ပါ။ ခရေပင်က ခရေရွက် လက်တစ်ဆုပ်ပြုပ် ။ နံနက်စာစားပြီး ရေနွေးကြမ်း တစ်ခွက်စာ ။ ညနေစာစားပြီး တစ်ခွက်သောက်ရင် ဆီးချိုကို ထိန်းနိုင်တယ် ပြောပါတယ်။ ကုသိုလ်တော်ဘုရားဝင်းမှာ ဝေယျာဝစ္စလုပ်နေတဲ့ အဘတစ်ဦးမှာခြေမခလုတ်တိုက်မိရာက အနာမကျက်နိုင်ပဲ ခြေတရွတ်ဆွဲ သွားနေတာ။ ဘုရားလာနေကျ ဆရာဝန်ကြီးတစ်ဦးက ဆေးခန်းခေါ်စစ်ဆေးပေးရာ
လူတစ်ယောက်ကို ဆွဲဆောင်တဲ့ နေရာမှာ ကိုယ်ဟန်အမူအရာက အရေးကြီးသလား…
ကိုယ်ဟန် အမူအရာဟာ လူတစ်ယောက်ကို ဆွဲဆောင်တဲ့ နေရာမှာ အင်မတန် အရေးကြီးတဲ့ အရာပါ ။ ချစ်ရေးချစ်ရာ ကိစ္စတွေမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် လူမှုဆက်ဆံရေး မှာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ဟန် အမူအရာဟာ သိပ် အရေးကြီးပါတယ် ။ များသော အားဖြင့် လူတွေက Relationship တစ်ခု စတင်တော့မယ် ဆိုရင် ” ငါတို့
စပျစ်သီး အစေ့လေးတွေရဲ့ အသုံးဝင်ပုံ အများသိအောင်မျှဝေပေးပါအုံးနော်….
ရွှေထက်ကို အဖိုးတန်တဲ့ စပျစ်သီးရဲ့ အစေ့လေးများ လူအများစု မစားဖြစ်ပဲ ထွေးထုတ်နေမိတဲ့စပျစ်သီးအစေ့လေးတွေအကြောင်း စပျစ်သီး အစေ့ရဲ့ အရသာက ခါးသက်သက် စားရတာကလည်း မာဆတ်ဆတ်နဲ့ဆိုတော့ စပျစ်သီးစားတိုင်း ထွေးထုတ်ပစ် လိုက်တာ များပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူတွေ မသိတဲ့ အချက် တစ်ခုက စပျစ်သီးက သူရဲ့အစွမ်းသတ္တိတွေ အကုန်လုံးကို အစေ့ထဲမှာ သိမ်းဆည်း ထားတာပါ။
ဘဝကို ခွန်အားဖြစ်စေသာ ပုံပြင် အများသိအောင်မျှဝေပေးပါအုံးနော်…
တစ်ခါက ခရီးသွား ကုန်သည်အဖွဲ့ တစ်ဖွဲ့ဟာ တောင်တန်းတစ်ခုကို ဖြတ်ပြီး ခရီးသွားကြရင်း မထင်မှတ်ပဲ အဖွဲ့ထဲမှ တစ်ယောက်ဟာ ခြေချော်ပီး ချောက်ကမ်းပါးထဲကို ပြုတ်ကျသွားခဲ့တယ် ။ ပြုတ်ကျသူဟာ ဂျောက်ကမ်းပါးရဲ့ ထက်ဝက်မှာ ရှိတဲ့ ကျောက်စွယ်လေးမှာ တင်နေတယ်။ ချောက်ကမ်းပါးကြီးကလဲ အင်မတန်မှ နက်ရှိုင်းတော့ ဘယ်သူမှလဲ ဆင်းမကယ်ဝံ့ကြဘူးပေါ့ ။ ဒီတော့ ကုန်သည်အဖွဲ့က
အရက်၊ ဘီယာ၊ ဝိုင် တစ်နေ့ကို ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်တဲ့အနေနဲ့ဘယ်လောက်ပမာဏထိ သောက်လို့ရလဲ
အရက်၊ ဘီယာ၊ ဝိုင် တစ်နေ့ကို ဘယ်လောက် သောက်လို့ရလဲ ကျွန်တော် ဒီဆောင်းပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီး တစ်ခုရှင်းပြချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် အရက်သောက်တာ အားမပေးပါ။ သို့သော် သောက်နေတဲ့ သူများကိုလည်း မပုတ်ခတ် ပါဘူး။ နည်းအမျိုးမျိုး နဲ့ ခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုး ကြောင့် ယနေ့ခေတ်မှာ သောက်တာပာာ အခုနောက်ပိုင်း လူတွေ အတွက်က ရေဝယ်သောက် သလို
ဒီနည်းလမ်းကောင်းတွေကို သိထားရင် အဝတ်အထည်နှင့် ဖိနပ်တွေ ဝတ်ဆင်တဲ့အခါ ဖြစ်တတ်တဲ့ ပြသနာတွေကို ဖြေရှင်နိုင်မှာပါနော်..
အဝတ်အစား (သို့) ဖိနပ်တွေကို ဝတ်ဆင်တဲ့ အခါ တခါတလေ အခက်အခဲ ပြဿနာတွေနဲ့ ကြုံတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စိတ်မပူပါနဲ့၊ ဒီလို ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းဖို့ နည်းလမ်းကောင်းတွေရှိပါတယ်။ ဘယ်လို အရာတွေက သင့်ရဲ့ အဝတ်အထည်နဲ့ ဖိနပ်တွေကို ကူညီဖြေရှင်းပေးနိုင်မလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ရအောင်။။။ 1. ဇစ်ညပ်တဲ့ ပြဿနာများ သင့်ရဲ့အဝတ်အစားပေါ်မှာ မမျှော်လင့်ဘဲ ဇစ်ဆွဲလို့မရတဲ့
တင်းတိပ်ကြောင့် စိတ်ညစ်နေရတဲ့ သူတွေအတွက် သဘာဝဆေးနည်းလေးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်..
တင်းတိပ်အတွက် စိတ်မညစ်ရစေဖို့ သဘာဝ ဆေးနည်း မျက်နှာပေါ်မှာ တင်းတိပ်ဖြစ်၍ စိတ်မညစ်ရအောင် သဘာဝနည်းနဲ့ ကုမယ် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မျက်နှာပေါ်မှာ တင်းတိပ်ဖြစ်၍ စိတ်ညစ်နေလျှင် အောက်ပါ သဘာ ဝဆေးနည်းများဖြင့် ကိုယ်တိုင် ကုသနိုင်ကြပါတယ်။ (၁) ဒန္တသုခဆေးပင် အရွက်စိမ်းကို ကြိတ်၍ သနပ်ခါးနှင့် ရောစပ်ကာ ညအိမ်ယာဝင်ခါနီးတိုင်း တင်းတိပ်ပေါ်ကို လိမ်းပေးပါ။ စိတ်ရှည်စွာဖြင့်
အဆိပ်အတောက်တွေကို အဆုတ်ထဲက ဖယ်ရှားဖို့ ဂျင်းကို ဘယ်လိုအသုံးပြုသင့်သလဲ…
လူတစ်ယောက် အသက်ရှင် ဖို့အ တွက် အရေးကြီး တဲ့အင်္ဂါ အစိတ် အပိုင်းတွေ ထဲမှာအဆုတ်လည်း ပါဝင်နေ ပါတယ် ။ လူတစ်ယောက် အသက်ရှင်ဖို့ အတွက် အရေးကြီးတဲ့ အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေ ထဲမှာအဆုတ် လည်း ပါဝင်နေ ပါတ ယ်။ အထူးသဖြင့် ဆေးလိပ်သောက် တတ်သူတွေ ဆိုရင် အဆုတ်ကို သ
စတော်ဘယ်ရီသီးစားခြင်းဖြင့် ရရှိနိုင်မည့် အကျိုးကျေးဇူးများ (ပူပြင်းတဲ့နွေရာသီအတွက် အစားလည်းဆေး ဆေးလည်းအစာဖြစ်ဖို့)
စတော်ဘယ်ရီသီးက အရသာရှိပြီး စားလို့ကောင်းရုံတင်မကပါဘူး၊ ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးတွေလည်း အများကြီးရှိပါတယ်။ ဗီတာမင် C ၊ ဗီတာမင် K ၊ ဖော်လစ် အက်ဆစ်၊ မဂ္ဂနီဆီယမ်၊ မဂ္ဂနီ၊ ပိုတက်ဆီယမ် စတဲ့ ဓာတ်တွေလည်း အများကြီးပါဝင်နေ ပါတယ်။ အဲ့ဒီအပြင် စတော်ဘယ်ရီ တစ်ခွက်လုံးစာမှ ၄၉ ကယ်လိုရီဘဲ ပါဝင်တာကြောင့် Diet